सविनले फेसबुकमा फोटो हाल्दा पग्लिइन् अनु ! « Ramailo छ
सविनले फेसबुकमा फोटो हाल्दा पग्लिइन् अनु !
प्रकाशित मिति : Nov 13, 2018
समय : 12:32 pm
नायक सविन श्रेष्ठ र नायिका अनु शाह प्रेममा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । लामो समयदेखि प्रेममा रहेपनि यी दुईले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो प्रेम स्विकारेका छैनन् ।
जे होस् सविन र अनुबिच गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको उनीहरुको निकटस्थ बताउँछन् । अनुले आफ्नो गर्धनमा सविनको नाम नै खोपाएकी छन् । तर केही समयदेखि उनीहरुको प्रेममा धमिरा लागि रहेको गाईंगुईं छ । बुझ्नमा आए अनुसार सविनदेखि अनु निकै रिसाएकी छन् । उनी यतिसम्म रिसाइन् कि उनी सविनसँग सम्पर्क विहिन नै भइन् ।
तर अनुसँग सम्पर्क बिहिन भएर सविन बस्न सकेनन् । त्यसैले उनले तिहारमा आफ्नो र अनुको तर्फबाट फेसबुक मार्फत शुभकामना दिए । जबकी अनुले सविनलाई फेसबुकमा ब्ल्क गरेकी थिइन् । सविन, शिल्पा र अनुसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
आफ्नो फोटो राखेर सविनले फेसबुकमा तिहारको शुभकामना दिएपछि अनु पग्लिइन् । ब्ल्क खोलिन् र उक्त तस्बिरमा ‘हार्ट’को रिप्लाइ दिइन् । बुझिए अनुसार उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध अहिले ठिकठाक छ । ठिक मात्रै होइन, सविन र अनुको प्रेम सम्बन्ध सधैं राम्रो होस् शुभकामना !